၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် တို့၏ မျှော်လင့်ချက် - News @ M-Media
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် တို့၏ မျှော်လင့်ချက်
in ဘာသာပြန် / သူ့အမြင် / ဆောင်းပါး / ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် — October 21, 2015
အောက်တိုဘာ ၂၁ ၊ ၂၀၁၅
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်အေဒီ ၈ရာစု အစပိုင်းမြန်မာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမြို့များသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်မှုနှစ်ပေါင်း တစ်ထောင် ၀န်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့လေပြီ။ သူတို့သည်သူတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ဘုရင်များနှင့် တိုင်းပြည် အပေါ်အကောင်းဆုံး သစ္စာစောင့်သိပြီး အမှုတော် ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ် သာသနာအပေါ်ယုံကြည်မှု အားကောင်းကြသောသူတို့အား အတိတ်ကာလကပင်မြန်မာ့နိုင်ငံ သားကောင်းများ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် နှစ်ပေါင်း များစွာငြိမ်းချမ်း ကျေနပ်စွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲမှု၊ အမျိုးသားရေး ၀ါဒီ အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ ခွဲခြား ချိုးနှိမ်မှုတို့ကြောင့် သူတို့၏ ပီတိချမ်းသာများ ဆက်လက် မတည်တံ့နိုင်ပါတော့ချေ။မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူလက်တွဲ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း ၊မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေးကြိုးပမ်းမှု ကာလ တစ်လျှောက်လုံးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဟူသော အခန်း ကဏ္ဍများအား ချန်ရစ်ထား၍ မရစကောင်းပါ။ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းများမှ ပယ်ဖျက်ခံရသည့်တိုင် မွတ်စ်လင်မ်တို့မှာ ၎င်းတို့၏ထောက်ခံ အားပေးမှုများကို အကြောင်းပြု၍ NLD ပါတီထံမှ မည်သည့် အကျိုးအမြတ်ကိုမျှ မမျှော်လင့်ထားကြ။လက်ရှိ ကာလတွင်တော့မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် လာမည့်၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သည့် ပါတီအား မဲပေးရမည်ကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ကုန်ကြ၏။
ဤဆောင်းပါးသည် လက်ရှိ မွတ်စ်လင်မ်ပါတီများ၊ လွှတ်တော် အမတ်လောင်းများ၏ အနေအထားတို့ကို အနုစိပ်လေ့လာ သုံးသပ်ထားပါသည်။ ထို့ပြင် အနာဂတ်ချောမွေ့ရေး လမ်းကြောင်းမှသွေဖည် မသွားစေရန်လည်း မွတ်စ်လင်မ်တို့ အတွက် အကြံပြုထားပါသည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်အေဒီ၈ရာစုအစပိုင်းတွင်မြန်မာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသမြို့များသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းသမိုင်းကြောင်း အရမြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ မှီတင်းနေထိုင်နေမှုမှာ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ဝန်းကျင်
သက်တမ်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ ဘုရင်များ၊ အစိုးရများ အဆက်ဆက်နှင့် တိုင်းပြည်အပေါ် အကောင်းဆုံး သစ္စာစောင့်သိပြီး အမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် ယုံကြည်မှုအားကောင်းကြသည့်သူတို့အား အတိတ်ကာလကပင် မြန်မာနိုင်ငံသားကောင်းများ အဖြစ် လက်ခံထားခဲ့ကြသည်။ ဘုရင်မင်း အဆက်ဆက်နှင့် အုပ်ချုပ်သူများက သူတို့၏ အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ဝံ့စားမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှ င့်အတူ လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်၊နိုင်ငံအ၀ှမ်း ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခွင့်တို့ကို အပြည့်အ၀ပေးခဲ့ကြသည်။
သူတို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်းချမ်းကျေနပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၏ ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲမှု၊ အမျိုးသားရေးဝါဒီ အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ခွဲခြားချိုးနှိမ်မှုတို့ကြောင့် သူတို့၏ပီတိချမ်းသာများ ဆက်လက် မတည်တံ့နိုင်ပါတော့ချေ။
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလ တစ်လျှောက်မှသည် လက်ရှိချိန်ထိ ခက်ခဲသောအခြေအနေတို့ကိုဖြတ်ကျော်လာရသည်။
သူတို့သည် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ပေါင်း များစွာပေးဆပ်ထားရပြီးလည်းဖြစ်နေပါသည်။ မြန်မာ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အတူမြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး အတွက် လက်တွဲပါဝင်ခဲ့ခြင်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းမှုကာလ တစ်လျှောက်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟူသော အခန်းကဏ္ဍများအား ချန်ရစ်ထား၍ မရစကောင်းချေ။ ထိုမြန်မာမွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများသည် သူတို့မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာပြည်သူတို့ အပေါ်မည်ရွေ့ မည်မျှသစ္စာစောင့်သိကြောင်း မှတ်တိုင်ထူချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းတရားများတွင် သူမ၏ ပညာဂုဏ်ရည်မြင့်မားမှု၊ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အကြား၌ ထင်ရှားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်နှင့်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်
စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေမှုများကြောင့်ပင်ဖြစ်ပြီး မွတ်စ်လင်မ် အများစုတို့သည် NLD ပါတီအတွက် ယုံကြည်မှုအပြည့် ဖြင့် အားပေး ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့တစေ သူမ၏ပါတီကား မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ အရေးအရာများတွင်လည်းကောင်း၊
မွတ်စ်လင်မ်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အကြားဖြစ်ပွားသည့် အဓိကရုဏ်းများတွင် လည်းကောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ရပ်တည်ပေးခြင်း မရှိခဲ့သဖြင့် မွတ်စ်လင်များနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သူမ၏နိုင်ငံရေး ရန်သူတော်များမှ သူမ၏ကျော်ကြားမှုအပေါ်
မရှုစိမ့်ဘဲသိက္ခာချအမည်ဖျက်နေခြင်းကြောင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရကြောင်းကိုလည်း မွတ်စ်လင်မ်တို့က နားလည်ပေးကြပြန်ပါသည်။ NLD ပါတီကမွတ်စ်လင်မ်များကို မျက်နှာသာပေးသည်၊ မွတ်စ်လင်မ်ပါတီဖြစ်သည်စသဖြင့် ထင်မြင်ခံရအောင်စွပ်စွဲနေခြင်းလည်းရှိနေသည်။
မြန်မာ့ပြည်တွင်း သတင်းစာများကိုလေ့လာကြည့်ပါက သိရသည်မှာ သူမကိုဝေဖန် ပုတ်ခတ်နေသူများ
အနက်မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်သည့် တစ်ယူသန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖွဲ့အစည်း-
မဘသနှင့် အချို့သောကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)ပါတီဝင်များမှာ ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေကြသည်ဟုလေ့လာရပါသည်။
USDPပါလီမန်အမတ်များ၊ စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ကြီးစိုးထားသည့် လွှတ်တော်ကသူမအား သမ္မတနေရာဝင်ပြိုင်နိုင်ခွင့်မရရှိအောင် ဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်လေသော အခါသူမအဖို့ပို၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာသည်။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်အများကအတော်အတန်ပင်သတိကရုပြုလာကြ၏။ ဤတွင် NLD ပါတီလည်း မွတ်စ်လင်မ်ပါတီဝင်များအပေါ် သတိထားကြည့်မိလာသည်။ NLD ပါတီနှင့် မွတ်စ်လင်မ်တို့ အကြားစည်းခြားမှု ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလာသည်နှင့်အမျှပါတီသည် မွတ်စ်လင်မ်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်လာလျက်နေရာပေးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်လာကြလေသည်။
၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာသော အခါရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်းမှမွတ်စ်လင်မ်တို့အား ဖယ်ထုတ်ခဲ့ချိန်တွင်တော့ သူတို့၏နည်းဗျူဟာများပိုမိုသိသာ ထင်ရှားလာပါတော့သည်။ အမှန်တော့ မြောက်များစွာသော မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် သူမ၏ပါတီအတွက်၎င်းတို့၏ ယုံကြည်မှု၊ဘ၀နှင့်ဥစ္စာရှိသမျှကိုမည်သည့် ပုံဟန်အသွယ်သွယ်ဖြင့် ဖြစ်စေပေးဆပ်စတေးကြရန် ၀န်လေးနေကြသူများမဟုတ်ကြောင်း
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနှင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ထူထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ကိုစည်သူမောင်သည်
တစ်ချိန်ကရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင်လည်းပါဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်၍ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်အရွေးခံလိုခဲ့သည်။
ကနဦးပိုင်းက NLD တွင်သူ့အားနေရာပေးခဲ့ကြပြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိမွတ်စ်လင်မ် အများစု၏မဲများကိုသူ့အားဖြင့် ရယူနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြ၏။ သို့သော်သူ့နေရာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးကိုအစားထိုးခဲ့သည့်အပြင်
သူ့ကိုလည်းအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ စာရင်းမှ ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်
သူ့အားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်မျှော်လင့်ထားကြကာ တိုင်းသိပြည်ကျော် NLD ပါတီမှဤသို့လူစားကိုဤသို့ပြုမူလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်မထားခဲ့ကြ။ NLD အနေဖြင့်ယင်းသို့ခွဲခြား ဆက်ဆံသည့်ခြေလှမ်းမျိုး မလှမ်းသင့်ကြောင်း၊ပါတီဝင်တိုင်းကို တူညီမျှတစွာဆက်ဆံသင့်ကြောင်း၊ ဤသို့သောလုပ်ရပ်သည် မိမိအား စိတ်ပျက်သွားစေသည် သာမက မွတ်စ်လင်မ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံးကိုလည်း စိတ်မသက်သာမှုဖြစ်သွားစေကြောင်း၊ သူ့အားစာရင်းမှပယ်သည့် အကြောင်းရင်းကိုလည်း အလျဉ်းမသိခဲ့ရကြောင်း စည်သူမောင်ကပြောကြားသည်ဟုသူနှင့် အစောပိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့သော
ထို့အတူမွတ်စ်လင်မ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို NLD မှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပါတီ၏
အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးတင်ဦးကိုမေးမြန်းရာတွင်လည်း အကြောင်းရင်းကိုမိမိမှ မသိရှိကြောင်းအဖြေပေးခဲ့သည်။ တစ်ခါ စည်သူမောင်အား “NLD ထဲမွတ်စ်လင်မ် အမတ်လောင်းတစ်ဦးမှ မရှိကြဘူးလား” ဟုမေးမြန်းရာသူက
“တိုက်ရိုက်မှတ်ချက်မပေးလိုပါဘူး။ဒါပေမယ့် NLD ကရွေးချယ်တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် အမတ်လောင်းတစ်ဦးမှမရှိခဲ့ပါဘူး” ဟုဖြေဆိုသွားကြောင်း ဖစ်ရှာကဆိုပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မင်းဆိုးမင်းညစ်များကိုမည်သို့ရင်ဆိုင်တုန့်ပြန်ရမည့် အကြောင်း၊အကြောက်တရား မထားရှိရမည့်အကြောင်း ထဲထဲဝင်ဝင်ရေးသားခဲ့ပါသော်လည်း ယခုအခါသူမသည် မဘသ အားကြောက်ရွံ့၍
လှုပ်ရှားတက်ကြွသူမွတ်စ်လင်မ် တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုမြတ်သူက ဖစ်ရှာကိုပြောကြားသည်။
လျှောက်ထားချက်ကို ပယ်ချခံရသည့် အဆိုပါလူများ အနက်၂၀၀၇ရွှေဝါရောင် အရေးအခင်းကာလ အတွင်း မကြာခဏ အဖမ်းခံခဲ့ရသော
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဝင်းမြမြ၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရုံးမှ ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်လွင်တို့လည်း
အပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း NLD အတွင်း လူများထံမှသိရသည်။
NLD၏ရွေးချယ်ခံစာရင်းမှဖယ်ရှားထားခြင်းမှာမလုပ်အပ်သောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ခြင်းဖြစ်သလို မှားယွင်းသည့်လုပ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့ပြီး NLD နှင့်ကာလရှည်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည့် မွတ်စ်လင်မ်အများအပြားရှိနေကြပြီးလွှတ်တော်၌ လူနည်းစု၏ အသံထုတ်ရန်လည်းမရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်ဟု ထပ်မံအသိပေးပြောခဲ့သည်ဟု ဖစ်ရှာနှင့် အင်တာဗျူးတွင် ဆိုခဲ့ပါကြောင်း
ဧရာဝတီမှဖေါ်ပြခဲ့သည်။ကိုမြအေးသည် ၈၈မျိုးဆက်မှ ကိုကိုကြီးလိုပင်
NLD နှင့်လက်တွဲရန်ကနဦးက စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။သို့သော်နောင်တွင် မိမိသည်လည်းအခြား မွတ်စ်လင်မ်များကဲ့သို့ အဖြစ်မခံလိုသဖြင့်
NLD ၏ဤခြေလှမ်းသည်လာမည့် အနာဂတ်၌မွတ်စ်လင်မ် အမတ်များ၊မွတ်စ်လင်မ်တို့၏
အားပေးထောက်ခံမှုများ လက်လွှတ်သွားနိုင်ကြောင်းကိုမြအေးမှ အသိပေးခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဦးရွှေမောင်သည်လည်း အလားတူပင် သူမွေးဖွားစဉ်က သူ့မိဘများသည်နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) မှနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် တင်သွင်းလျှောက်ထားချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်သည်။ ထိုအခါဦးရွှေမောင်သည် တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ် အဖြစ်ဝင်ပြိုင်ရန် မှန်ကန်ခိုင်မာသည့်အထောက်အထားအားလုံးကို တင်ပြကာရှေ့တိုးကြိုးစားပြန်သည်။ သို့ရာတွင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)ကထိုနည်း အတိုင်းထပ်မံပယ်ချလိုက်သည်။
ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေး ပါတီ DHRP ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းကလည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
(UEC)၏ဆုံးဖြတ်မှုကို စိတ်ပျက်ရသည်။သူ့ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၇ဦးအားနိုင်ငံသား အရည်အချင်းမပြည့်မီ၍ ဟုဆိုကာ
ပယ်ချလိုက်သည်။စာရင်းတင်သွင်းသူ၁၈ဦးအနက်တစ်ဦးသာရွေးချယ် အတည်ပြုခံရသဖြင့် DHRP ပါတီမှာ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)ကအသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင် ရုပ်သိမ်းမည့် အခြေအနေသို့ရောက်နေသည်။
အကြောင်းမှာပါတီတစ်ခု၌ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူ ၃ဦး မရှိပါက ပါတီကိုပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။
မိမိသည်၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့လင့်ကစားယခု အချိန်ကျမှမိမိအားအကြောင်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ပယ်ချလိုက်ခြင်းသည် ရယ်စရာဖြစ်နေပါသည်ဟုအပယ်ခံစာရင်းထဲပါဝင်သည့် ဦးကျော်မင်းကဆိုသည်။
“ဒါဟာနိုင်ငံရေးလောကထဲ မွတ်စ်လင်မ်ကင်းစင်ရေး လုပ်တဲ့ဗျူဟာ တစ်ရပ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မြင်ပါတယ်”
ပါတီကိုတည်ထောင်သူများဖြစ်သောဦးမောင်မောင်စိုး ၊ဦးခင်မောင်သိန်းနှင့် ဦးလှမြင့်တို့မှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးကြိုးပမ်းခဲ့သူများဖြစ်သည်။
အလားတူ ဦးဆန်းတင်ကျော်မှာလည်း စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကာလအတွင်းအကျဉ်းကျနေစဉ်ပြင်းထန်စွာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ခံခဲ့ရပေသည်။
ကနဦးပိုင်းအဆင့်၌၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အများအပြားကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)မှပယ်ချခဲ့သော်လည်းယခုအခါသူတို့၏ပါတီမှ ဦးဆန်းတင်ကျော်(မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကိုယ်စားပြု)၊
ဦးရန်နိုင်(သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ကိုယ်စားပြု)၊ ဦးအောင်မြင့်မင်း (တာမွေမြို့နယ်ကိုယ်စားပြု) အစရှိသူတို့ကိုပြန်လည်လက်ခံ၍ယခုသော် မဲဆွယ်လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသိရသည် သတင်းတရပ်မှာတော့ မွတ်စ်လင်မ် ကိုယ်စားလှယ် ၁၁ ဦးကို
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) မှ ပြန်လည် လက်ခံခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
NLD ဗဟိုကော်မတီမှ၎င်း၏မွတ်စ်လင်မ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၁၅ဦးကိုစာရင်းမှတမင် ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသားရေးဝါဒီတို့၏ရန်စောင်လှုပ်ရှားမှုမြင့်မားလာခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှု ရှိနေနိုင်ကြောင်း NLD ထိပ်တန်းအဖွဲ့ဝင်နှင့်ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူဦးကိုနီမှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
NLD အနေနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားဆန့်ကျင်သောပါတီဟုတံဆိပ်ကပ်ခံရမည်ကို စိုးရွံ့နေခြင်း(သို့တည်းမဟုတ်) လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)
ဗဟိုကော်မီတီ ဦးဝင်းထိန်မှလည်း မဘသ ၏ ဝေဖန်မှုကို စိုးရိမ်ပြီးမွတ်စ်လင်မ် အမတ်လောင်းများကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း
ဆက်၍ဆိုရပါလျှင်မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် ယခုအခါမိမိတို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေး အလားအလာကို၊လည်းကောင်း၊
မည်သည့်ပါတီကမိမိတို့အရေးကိုကိုယ်စားပြုပြောဆိုပေးမည်ကို လည်းကောင်း မသိနိုင်တော့ချေ။
မည်သူ့ကိုအားပေးထောက်ခံရမည်၊ မည်သူ့ကိုမဲပေးရမည့် အပေါ်စိတ်ရှုပ်ထွေးကုန်ကြသည်။
လက်ရှိအာဏာရပါတီနှင့်အတိုက်အခံပါတီတို့၏ ဦးတည်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အမြင် သဘောထားများကိုကောင်းစွာသိနားလည်လိုက်ကြပေပြီ။
(USDP)တို့ကနှစ်ပေါင်း၆၀တိုင်တိုင်မိမိတို့၏ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့ကိုပေးဆပ်နေစေခြင်းတည်းဟူသော
မွတ်စ်လင်မ်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အကြား မခံစားရနိုင်လောက်သော အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတို့ကို ခံစားရပြီးနောက်မှာပင်
၎င်းတို့အားဆက်လက်ထောက်ခံနေဦးမည်ဆိုပါက မိမိတို့၏ အနာဂတ်သည်အိပ်မက်ဆိုးထဲသာ
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူမွတ်စ်လင်မ်တို့ကအတိုက်အခံ NLD ပါတီသည် မိမိတို့အပေါ် တစ်နည်းတစ်ဖုံဖေးမကူညီလာလိမ့်မည်
ဟုမျှော်လင့်နေခဲ့ကြသော်လည်း၎င်းထင်မြင်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်စွာမထင်မှတ်ထားသော ဖိအားကိုကြုံဆုံရသည်၌
အမြင်ပြောင်းလဲသွားကြပါသည်။သို့သော်တဖန် NLD မှ မွတ်စ်လင်မ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဘေးဖယ်လိုက်ခြင်းမှာ
နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရဖြစ်ကြောင်း၊ မွတ်စ်လင်မ်များ အတွက် NLD ပါတီသာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး
မည်သည့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှမထားဘဲ မဲပေးစေလိုကြောင်းရှေ့နေဦးကိုနီက တစ်ဆင့်တက်အကြံပြုထားပါသည်။
သို့သော် NLD အပေါ်ရပ်တည်ပေးရန်ယုံကြည်မှု အားနည်းသွားသောမွတ်စ်လင်မ် အများအပြားလည်းရှိနေကြသည်။
သို့ဖြစ်၍လွှတ်တော်တွင်မိမိတို့အရေးကို အလေးထားပေးကြမည့် တစ်သီးပုဂ္ဂလမွတ်စ်လင်မ်အမတ်လောင်းများကိုသာ
အနည်းဆုံး၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်ထောက်ခံချက်ရရှိမှသာ ၄င်းအဆိုသည်သ က်ဝင်လှုပ်ရှားလာနိုင်ပေသည်။
လတ်တစ်လောတွင်တော့ဖော်ပြပြီးသော အနေအထားများအရ မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)ကိုရော
NLD ကိုပါအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတော့ဘဲ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်လျက်ရှိလေသည်။
သို့ဆိုလျှင်မွတ်စ်လင်မ်တို့သည်မည်သည့်ဖက်ကို ရပ်တည်ကြရပါမည်နည်း ?
နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အရမွတ်စ်လင်မ်အမတ်လောင်းများအား ထုတ်ဖယ်ပစ်ရခြင်းဟူသော ဦးကိုနီ၏သဘောတရားအမြင်ကို
ကျွန်ုပ်မှလက်ခံလိုပါ၏။အဘယ်ကြောင့်ဟူမူအကယ်၍ NLD မှ မွတ်စ်လင်မ်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကိုရွေးချယ်တင်သွင်းပြီး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC)ကအကြောင်းပြချက် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ဖယ်ရှား ပိတ်ပင်လိုက်သည်ဆိုငြားအံ့ – NLD
ဖက်မှယှဉ်ပြိုင်သူတစ်ဦးလုံးဝဆုံးရှုံးကာ ဥပဒေအရလည်းထပ်မံ အစားထိုးခွင့်မရှိတော့ပေ။
(UEC)မှပယ်ချနိုင်ချေရှိသူများဖြစ်နေသဖြင့်၎င်းတို့ကို စာရင်းတွင်မပါဝင်သွားစေရန် သတိထားကာရွေးချယ် စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေမွတ်စ်လင်မ်အမြောက်အများကမူ NLD သည်လည်းမိမိတို့ အတွက်သင့်လျော်သော ပါတီမဟုတ်ဟုခံစားနေကြဆဲပင်။
ဤသို့မယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းကား မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် NLD ကိုသော်လည်းကောင်း၊ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
(USDP)ကိုသော်လည်းကောင်းမြန်မာ့ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီခေတ်ဦးကာလ(၁၉၄၇-၆၂) ၌၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုဦးဆောင်သည့် ဖဆပလနှင့်နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်မိသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေ၏။
၎င်းဖဆပလကမွတ်စ်လင်မ်တို့အပေါ် မလိုချင်သော သင်ခန်းစာကိုပေးထားခဲ့ဖူးပါသည်။
ဖဆပလ (ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့)သည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု၌လူနှင့်
မဲအင်အားလိုအပ်သဖြင့် ဗမာမွတ်ဆလင်ကွန်ဂရက်(ဗမကအဖွဲ့) ဖွဲ့စည်းရန်တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
သို့နှင့်မွတ်စ်လင်မ်အများအပြားစစ်ထဲဝင်ကြ၏၊နိုင်ငံရေးလောကထဲ ၀င်ရောက်ကြ၏၊လွတ်လပ်ရေး အတွက်ကြိုးပမ်းကြ၏
၊ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင် ဖဆပလအမတ်များကိုထောက်ခံ အားပေးခဲ့ကြ၏။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ဖဆပလမှ အစိုးရဖွဲ့နိုင်သောအခါ ၎င်းတို့၏ကတိက၀တ်ချိုးဖျက်၍ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်
ဤဖြစ်စဉ်မြင်ကွင်းနှင့်ကြုံတွေ့မှုအပေါင်းကို မူတည်လျက် မွတ်စ်လင်မ်တို့သည် NLD ကိုဖြစ်စေကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)ကိုဖြစ်စေယုံစားအားကိုးနိုင်စွမ်း မရှိတော့။မွတ်စ်လင်မ်တို့ကို အင်အားဖြည့်ပါဝင်အောင်ကတိက၀တ် အမျိုးမျိုးပေးထားသော်လည်း
အနာဂတ်၌ယင်းကတိက၀တ်များကို အလျဉ်းစောင့်ထိန်းဖော်ဆောင်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟုတွက်ဆထား၍ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ငြားလည်းလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် NLD အားရွေးချယ်ခြင်းသည်မွတ်စ်လင်မ်တို့အတွက်မမှားနိုင်ပါဟုကျွန်ုပ် ထင်မြင်မိပါသည်။မွတ်စ်လင်မ်ကိုယ်စားလှယ်များကို
နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်သာယာယီ ဖယ်ထုတ်ထားရခြင်းဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်မှ အမြင်ရှိနေပါ၏။အကယ်၍
သည်တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောပါတီဖြစ်ပါမည်။၎င်းနောက်လွှတ်တော် အတွင်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်ရန် NLD
အဖို့ရွေးကောက်ပွဲ၌အမတ်နေရာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက် ရရှိထားမှဖြစ်ပေမည်။အကယ်၍NLD
ဥပဒေနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမျှဖြစ်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်၊
၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးလျှော့ချခြင်း၊နိုင်ငံတွင်းရှိလူနည်းစု အခွင့်အရေးစသည်တို့အား စီစဉ်မွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထာဝစဉ်ထောက်ခံလာခဲ့သည့်မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးနှင့်နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုတော့ထည့်တွက်ရန် မည်သည့်အခါမျှ
ဆန့်ကျင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံတော်သစ် ထံခေါ်ဆောင်သွားမည့်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရ၌ ဤနိုင်ငံရေးစည်းမျဉ်းနှင့် ကတိက၀တ်များ ဖြည့်ဆည်းရန်သည် အာဏာ ရလာမည့် အစိုးရ၏ မလွဲမသွေပြုလုပ်ရမည့် လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အဖြေသည်လည်းမွတ်စ်လင်မ်တို့၏ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ပေါ် မူတည်နေပါသည်။မွတ်စ်လင်မ်တိုင်းထံ၌ အတွေးဝင်နေသည်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးပေါင်းစုံအကြားငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု၊ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊တန်းတူညီမျှမှု၊ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ဘ၀ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါ၏။ လက်ရှိနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကမိမိတို့အားလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကို မပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း သူတို့ယုံကြည်ကြ၏။ထိုအချက်များအားဖြည့်ဆည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည့် အစိုးရသစ်တစ်ရပ်ကိုမျှော်လင့်နေကြ၏။ အရှိအတိုင်းဆိုရပါလျှင်အစိုးရသစ်တစ်ရပ်သည်လွှတ်တော် အတွင်းနေရာ အများစုလိုအပ်ပေသည်။
လူနည်းစုဝင်မွတ်စ်လင်မ်လွှတ်တော်အမတ်များအနေနှင့် အမြင်တူပြီးရင်းနှီးသော အခြားလွှတ်တော်အမတ်များ၏
ဤအနေအထားကစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံး၊ယုံကြည် အားထားရဆုံးနိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုကိုအလျဉ်မီရွေးချယ်စေရန်တောင်းဆိုလာပါတော့သည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်တောင်ပြိုကမ်းပြိုမဲ ရရှိအောင်မြင်နိုင်ချေရှိသည်မှာ မည်သည့်ပါတီနည်း ?
သွားလမ်းသာပါက NLD ပါတီသာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်ရှားနေပေသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာစိတ်ချအားထားစရာ အနေအထားမရှိနိုင်သေးဟု ထင်မြင်ယူဆနေဆဲ မွတ်စ်လင်မ်များအနေဖြင့်
ယခုအချိန်တွင်မည်သူက မွတ်စ်လင်မ်များ အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဟူသည်ကိုမေးမြန်းလိုပါသည်။
မည်သူမျှတိတိကျကျညွှန်းဆိုဖော်ပြနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ NLD နှင့်ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လျက်သာခြင်း၊ နာခြင်းအားဖြင့်တွက်မည်ဆိုသော်ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (USDP)အားရွေးလျှင်နစ်နာမှုကြီးမားမည်၊
NLD အားရွေးပါကနစ်နာမှုနည်းပါးမည်ဟု မွတ်စ်လင်မ်များတွေးထင်ကြပါလိမ့်မည်။
ရှရီအဟ်စည်းမျဉ်းဥပဒေများအရအကယ်၍ မိမိသည်နစ်နာမှု နှစ်မျိုးကို တပြိုင်တည်းဆုံရသည်ဆိုအံ့၊ မဖြစ်မနေရွေးရလျှင်နစ်နာမှု နည်းပါးသည့် အရာတစ်ခုကို သာရွေးချယ်အပ်ပေသည်။သေခြင်းတရားနှင့် တားမြစ်အစာ – တစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ရတော့မည်ဆိုပါက
(တားမြစ်ထားသည့်အရာ)ဟရာမ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်း၏ ဥပမာ အလားဖြစ်ပေသည်။သို့ဖြစ်ရာမွတ်စ်လင်မ်တို့အတွက် NLD
မှအပအခြားရွေးကောင်းစရာမရှိပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထူခြားဝိသေသများ၊ဘ၀နှင့်ရင်းပြီးစွန့်လွှတ် စတေးထားမှုများကိုအကြောင်းပြု၍ နိုင်ငံတော် အဆင့်အနေဖြင့် NLD ကိုသာရွေးအပ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီ၊လူ့အခွင့်အရေး၊လူမျိုးဘာသာခွဲခြားဆက်ဆံမှု (စသည်တို့)ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်သည်ဟု
ကမ္ဘာတစ်ဝှန်း၏ပြင်းထန်သောစွပ်စွဲမှုနှင့် ရှုတ်ချမှုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ခံယူနေရပါသည်။
အမှန်ပင်သူမသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ယင်းသို့ ထင်မြင်သည်အထိသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများ၊ဒဿနများ၊
အနစ်နာခံမှုများကိုလုံးလုံးလျားလျားလျစ်လျူရှု ဆန့်ကျင်နေပါသည်လား။ကျွန်ုပ် ယုံကြည်သည်မှာသူမသည် ထိုသို့ လုံးလုံးဆန့်ကျင့်နိုင်သူမဟုတ်ပါ။
သူမ ပြုလုပ်သမျှသည် ကာလရှည် ယိုယွင်းနေသည့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန် အလို့ငှာယင်းသို့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု
ကျွန်ုပ်မှခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါသည်။သူမ၏ လုပ်ရပ်များ၊ ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားခဲ့သည့် အချက်များနှင့်
လက်ရှိအောင်မြင်မှုများမှာမည်သူမျှ မထင်မှတ်ထားသည့်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောက၏ ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ကြောင်းသူမကို
ဝေဖန်သူတိုင်းပြန်လည် သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပေသည်။ဥပမာ၊ ဒီမိုကရက်တစ်အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ခြင်း
၊ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊လွှတ်တော်ထဲသို့ တရားဝင်အတိုက်အခံ အမတ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခြင်း၊
ယနေ့အမတ်လောင်း၁၀၀၀ကျော်နှင့် အတူလာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းစသည်တို့သည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်၏ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်များဖြစ်ပါသည်။အကယ်၍သူမသည်နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက် အနစ်နာပေးဆပ်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါက ဤအပြောင်းအလဲအပေါင်းတို့ အကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပါလေ။
မြန်မာနိုင်ငံသည်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်နှစ်ပေါင်း၆၀ကျော်ရောက်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးသောကမ္ဘာ့နိုင်ငံအဆင့်အထိ နိမ့်ကျသွားပါသည်။
အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်။ဤရွှေရောင် အခွင့်အလမ်းကိုပြောင်းလဲခြင်း အတွက်အသုံးချဖို့လိုအပ်သည်။အမှန်ကိုဆိုရလျှင်
NLD သည်မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကိုပြောင်းလဲနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသောပါတီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အပြောင်းအလဲကိုတကယ်လိုလားပါလျှင်မည်သူ့အား မဲပေးထောက်ခံရမည်ဟူသည်ကို ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
၎င်းနောက်အခြားအရာများကို ဒုတိယဆင့် အနေဖြင့်စဉ်းစားပါလေ။
မဝေးတော့သည့်အနာဂတ်တွင် NLD သည်အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် တရားမျှတပြီး
ကာလရှည်အိပ်မက်အားအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လာလေပြီ။သို့ဖြစ်၍ မွတ်စ်လင်မ်မဲ ဆန္ဒရှင်အပေါင်းမှ
မိမိတို့၏အသည်းကြားကအဖိုးတန်မဲပြားတို့ကို NLD အမတ်လောင်းများထံ ထည့်ဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရန်အကောင်းဆုံး အချိန်အခါရောက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ရေးသား တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆိုချင်သည်မှာကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မွတ်စ်လင် အမတ်လောင်းများအား အားပေးထောက်ခံခြင်းကို
မွတ်စ်လင်မ့်ရေးရာများကို ဖော်ပြခွင့်ရနိုင်ပြီး၎င်းဖေါ်ပြချက်များမှာ လွှတ်တော်တွင် အခိုင်အမာမှတ်တမ်းတင်ခံရပေမည်။သို့ရာတွင် မည်သည့်အုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်
ထောက်ခံမဲ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်ရမှသာလက်ခံမှုရရှိပေမည်။ထိုအခါ မွတ်စ်လင်မ့်ရေးရာများနှင့်စ ပ်လျဉ်း၍မည်သူကထိုကဲ့သို့
ထောက်ခံအားပေးနိုင်ပါမည်နည်း။မွတ်စ်လင်မ်တို့၏ ဒုက္ခခံစားမှုနှင့် နစ်နာမှုတို့ကိုနားလည်ပေးနိုင်သောမိတ်ဖက်ပါတီသာလျှင် မဟုတ်ပေလော။
သို့တည်းမဟုတ်တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့်တစ်ပြေးညီ ဆက်ဆံမှုတို့ကိုကျားကန်ပေးမည့်သူပင်မဟုတ်ပေလော။
လွှတ်တော်ရောက်လာမည့် မွတ်စ်လင်မ် အမတ်လောင်းများအတွက် ပမာအားဖြင့်ကြည့်လျှင်ဦးရွှေမောင်သည်ရိုဟင်ဂျာ အရေးအရာများကို လွှတ်တော်တွင်အခါမလတ်တင်ပြဖူးပါသည်။
သို့သော်သူသည်ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)၏ လွှတ်တော် အမတ် ဖြစ်နေလင့်ကစား
သူ့လူထုအတွက်တင်ပြချက်များကိုကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) က ထောက်ခံ အားပေးခဲ့သည်ကိုမည်သည့်အခါမျှမရရှိခဲ့ဖူးပါ။
သို့သော်လည်းသူ၏ဖော်ပြချက်များ အဟောသိကံထိုက်မှုတော့ မဖြစ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာများတို့၏အကြောင်းနှင့် အချက်အလက်အများအပြားကိုကမ္ဘာက သိရှိနိုင်ခဲ့ကြလေသည်။
ဒေါက်တာ မောင်လာနာ အက္ကဗရ် ရှားဟ် ရေးသားသော
TO WHOM MUSLIMS SHOULD VOTE: IN THE CONTEXT OF THEIR HOPE FOR BETTER LIFE AND
UPCOMING MYANMAR ELECTION, 2015 ကို လှိုင်းသစ်အောင် မှ ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုရေးသားသည်။
(ဆောင်းပါးရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားဒေါက်တာမောင်လာနာ အက္ကဗရ်ရှားဟ် (ခ) ဦးထွန်းအောင်သည်မလေးရှားနိုင်ငံ IIU –
* ဆောင်းပါးရှင်၏ အမြင်နှင့် အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။
Aung San Suu Kyi’s ‘silence’ on the Rohingya: Has ‘The Lady’ lost her voice?, By Tim Hume, CNN, Updated 0321 GMT (1021 HKT) June 1, 2014
Why won’t Aung San Suu Kyi say the word ‘Rohingya’? (COMMENTARY), Brian Pellot, December 4, 2014,
NLD Accuses Ma Ba Tha of Unlawful Influence, MOE MYINT / THE IRRAWADDY | 23 Sep 2015
Myanmar poll: NLD ‘rejects Muslim candidates’, Jonah Fisher, 8 September 2015 Last updated at 00:53 BST
NLD Blocked Muslim Candidates to Appease Ma Ba Tha: Party Member, A prominent member of the NLD claims the opposition party has succumbed to pressure from Buddhist nationalists by refusing to fieldasingle Muslim candidate in upcoming elections, by HANNA HINDSTROM / THE IRRAWADDY | 31 Aug 2015
NLD, Ma Ba Tha in War of Words Over Campaign Claims, by KYAW PHYO THA / THE IRRAWADDY | 24 Sep 2015
Ruling Party MP Cuts Ties to Contest November Poll as an Independent, ShweMaung,aUSDP MP representing Arakan State’s Buthidaung Township, will contest the upcoming general election as an independent candidate, by MOE MYINT / THE IRRAWADDY | 11 Aug 2015
Muslim Party Facing Political Oblivion After Candidates Rejected, by MOE MYINT / THE IRRAWADDY | 01 Sep 2015
Muslim political group gets greenlight under condition, Myanmar Times, Khin Su Wai, Friday, 02 November 2012
Lawyers Speak Out Against Newly Minted Race and Religion Laws, by KYAW PHYO THA / THE IRRAWADDY | 02 Sep 2015
Muslim Myanmar candidates disqualified in election, World Bulletin / News Desk, 13:54, 18 September 2015 Friday
The Telegraph Group Limited, London, 2015, Muslims barred from Myanmar poll, The anti-Rohingya sentiment has spilled intoabroader ostracisation of the community across the country, Philip Sherwell, September 10, 2015
Complaints continue over NLD’s controversial candidate list, Myanmar Times, EiEi Toe Lwin,Ye Mon | Monday, 10 August 2015
Moshe Yegar . (1972). The Muslims of Burma. Germany, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, P. 47
Myanmar poll: NLD ‘rejects Muslim candidates’, Jonah Fisher reports, 8 September 2015 Last updated at 00:53 BST
Myanmar’s 2015 general elections explained, Preparations are underway for Myanmar’s general elections on 8 November, BBC’s Jonah Fisher, 20, July, 2015
Myanmar’s 2015 general elections explained, Will the vote be democratic?, BBC’s Jonah Fisher in Yangon explains the key issues, 20, July, 2015,
Suu Kyi Tells Voters to Ignore Election Intimidation, Burma’s opposition leader Aung San Suu Kyi tells voters to ignore intimidation and to cast their ballots without fear in the upcoming general election, by MIN KYI THEIN / THE ASSOCIATED PRESS,31 Aug 2015
ဓာတ်ပုံ Credit – မင်းသားလေး
ထငျရှားသညျ့ ယူအအေီး လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူ လနျဒနျကား မတျောတဆမှုတှငျ ကှယျလှနျ
လုံခွုံရေးကောငျစီတှငျ တရုတျက စဈကောငျစီကို ထပျမံကာကှယျပေး
အီရနျသမ်မတရှေးကောကျပှဲတှငျ အီဘရာဟငျ ရိုငျစီ အနိုငျရရှိ
ပွညျတှငျးစဈ အကွီးအကယျြဖွဈမညျ့ အန်တရာယျအတှကျ ကုလကိုယျစားလှယျ သတိထပျပေး
သကျတမျးလှနျတော့မညျ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေး လကျခံရနျ ပါလကျစတိုငျးကို အစ်စရေးက အကွပျကိုငျ
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (2) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (505) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (210) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (17,729) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,593) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (136) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (566) သူ့အမြင် (220) အားကစား (2,710) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (18) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (4,252) နိုင်ငံတကာသတင်း (9,145) အာဖရိက (473) အာရှ-ပဖိဖိတ် (2,979) အမေရိက (1,087) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (2,193) ဥရောပ (1,021) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,391) Essay (1) M-Media Knowledge (35) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (128) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (30) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (57) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (870) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)
Archives Select Month June 2021 (46) May 2021 (64) April 2021 (77) March 2021 (62) February 2021 (60) January 2021 (79) December 2020 (99) November 2020 (48) October 2020 (65) September 2020 (79) August 2020 (56) July 2020 (59) June 2020 (63) May 2020 (71) April 2020 (91) March 2020 (77) February 2020 (84) January 2020 (88) December 2019 (70) November 2019 (71) October 2019 (89) September 2019 (81) August 2019 (67) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)